ကျွန်ုပ်တို့အိမ်အတွက် Raspberry Pi နှင့်စီမံကိန်း ၁၃ ခုသည်လွယ်ကူပြီးအသုံးဝင်ပါသည်။ | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
များစွာရှိပါသည် Raspberry Pi နှင့်စီမံကိန်းများ MagPi ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ လစဉ်လတိုင်း Raspberry Pi နဲ့ပိုက်ဆံအနည်းငယ်လောက်လုပ်နိုင်တဲ့ပရောဂျက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ ၂၀ အကြောင်းပြောမယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်အတွက် Raspberry Pi နှင့်လုပ်နိုင်သောစီမံကိန်းများ။
အိမ်ကိုပိုမိုအသုံး ၀ င်စေရန်နှင့် Raspberry Pi ကို minipc အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းရွေ့လျားစေသောစီမံကိန်းများ၊ ငါတို့ယခုကျွန်ုပ်တို့သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်းများအိမ်သူအိမ်သားအဘို့ဖြစ်ကြ၏ ၎င်းတို့သည်ဤနယ်ပယ်အတွက်တစ်ခုတည်းသောစီမံကိန်းများမဟုတ်ပါသူတို့လူကြိုက်အများဆုံးပေမယ့်။
2 SSH တံခါးပေါက်
4 မူလစာမျက်နှာ firewall
5 Google ပင်မ
7 ကြက်သွန်နီ Pi
9 Arcade စက်
15 သင်၏လက်ချောင်းထိပ်ရှိ FM လိုင်းတစ်ခု
18 Motion sensor ကင်မရာ
19 MoccaPi သို့မဟုတ် Raspberry Pi ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအကောင်းဆုံးကော်ဖီ
Raspberry Pi နှင့် Kodi နှင့်ပေါင်းစပ် Raspbian ငါတို့ကစျေးပေါပြီးရနိုင်တယ် တတ်နိုင်မီဒီယာစင်တာ။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ OpenElec သို့ပင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Raspberry Pi၊ hdmi cable တစ်ခုသာလိုအပ်လိမ့်မည် ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ TV နှင့် built-in မောက်စ်ဖြင့်ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ operating system options များကိုထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်အတော်လေးတတ်နိုင်သည်နှင့်သင်တန်း၏အိမ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုသည်။
ဤရွေ့ကား Raspberry Pi တွင်အသုံးများဆုံး command များဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အိမ်တွင်းကွန်ပျူတာများနှင့်ကွန်ပျူတာများကိုအပြင်ဘက်မှဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အိုင်ပီလိပ်စာများနှင့်ကွန်ယက်လုံခြုံရေးအတွက်ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းလုပ်နိုင်သည် အများသုံးအိုင်ပီလိပ်စာရှိစေရန် Raspberry Pi ကိုသုံးပါ ဆက်သွယ်ပါ SSH မှတစ်ဆင့်အိမ်အတွင်းရှိကွန်ပျူတာများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်မည့် Raspberry Pi သို့ဖြစ်သည်။ ဒီကွန်ပျူတာတွေမှာကိုယ်ပိုင်အိုင်ပီလိပ်စာတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့်အပြင်လူတွေကအဲဒါကိုမရရှိနိုင်ကြဘူး။ ဤစီမံကိန်းအတွက် Raspberry နှင့်အတူ Raspberry Pi ကိုသာလိုအပ်လိမ့်မည်။ အဲဒါသာ။
Raspberry Pi အတွက်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စီမံကိန်း ကလေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုစောင့်ကြည့်ရန်နာမည်ကြီး Pi Cam ကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်ပါဝင်သည်။ Pi Cam ကို Raspberry Pi နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်သို့မဟုတ်ကလေး၏နေရာကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ကင်မရာကိုနေရာတွင်ထားပါ။ ထို့နောက်သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ၊ ဘာလုပ်သည်ကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်သည် Raspberry Pi ကို SSH မှတဆင့်သို့မဟုတ်အဝေးထိန်းကိရိယာဖြင့်သာဆက်သွယ်ရမည် ခဲ့တာသို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်လျက်ရှိသည်အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်။
ဤအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မော်နီတာသည်အိမ်များအတွက်အသုံးဝင်သော်လည်းအခြားစီမံကိန်းများထက် ပို၍ စျေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည် PiCam ၏စျေးနှုန်းကို Raspberry Pi ၏စျေးနှုန်းနှင့်ပေါင်းထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၎င်းသည်အိမ်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။
Raspberry Pi ဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် Arcade စက်ကိုဖန်တီးပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများကိုအပြင်ဘက်မှဆက်သွယ်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း Raspberry Pi ကိုလည်းပြင်ပတိုက်ခိုက်မှုများမှကာကွယ်နိုင်သည်။ ဒီကိစ္စမှာ ငါတို့ Raspberry Pi လိုအချက်အချာကျမှတစ်ခုလိုလိမ့်မယ် (အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၌ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုရှိသောကွန်ပျူတာများစွာရှိပါက) Raspberry Pi အတွက် Tor ကိုသုံးသည်.
Tor နှင့်၎င်း၏ "ကြက်သွန်နီ" နည်းပညာများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်ခိုက်မှုများမှကာကွယ်ရုံသာမကစွမ်းအားကြီးသော firewall တစ်ခုရှိနိုင်သည် ကျနော်တို့အမည်မသိဝဘ် browsing လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်စီမံကိန်းသည် software ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ လူသိများသော Raspbian သို့ကျွန်ုပ်တို့သည် Tor နှင့်၎င်း၏နည်းပညာကိုထည့်ရမည်။ လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းပါသည်။
Virtual လက်ထောက်များအနေဖြင့်ဖမ်းဆီးနေပြီ။ နှင့်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒီလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆက်စပ်မထားဘူးဒါပေမယ့်မဆိုစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ဘယ်သူမဆိုဒီ Raspbery Pi စီမံကိန်းကိုလုပ်နိုင်တယ် Raspberry Pi ကို ကျေးဇူးတင်၍ သင်၏ virtual assistant ကိုဖန်တီးပါ။ ဂူဂဲလ်သည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိခဲ့သည် MagPi နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း သူတို့အဘို့အကိရိယာအစုံစတင်ခဲ့သည် ကတ်ထူပြားတစ်လုံးကို Google Home တည်ဆောက်ပါ။ ဒါဟာအိမ်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအသုံးဝင်သောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ကတ်ထူပြားဘောင်ကိုအစားထိုးမည့်မကြာသေးမီကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် တစ်အိမ်မှာ intercom 80 ကနေ။
အကယ်၍ Google Home သည် Raspberry Pi နှင့်ဆက်သွယ်ပါက Amazon Echo သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် Amazon Echo ကိုမဖန်တီးမီကြာမြင့်စွာကတည်းကပင်မရှိခဲ့ပါ။ Echo သည်စမတ်ကျသောစပီကာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Raspberry Pi ၏ကျေးဇူးကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် Amazon Echo ပုံတူကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်ခဲ့သည် ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆောက်ရမယ်ဆိုတာပြောပြတယ် ပြီးတော့အိမ်မှာရှိတာကကောင်းပါတယ်။ ဒီကိရိယာကိုတောင်လုပ်နိုင်တယ် မူလထုတ်ကုန်ထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ် သို့မဟုတ် Bezos စက်တွင်မပါရှိသောစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်မှုများကိုထည့်ပါ။
Raspberry Pi ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကအိမ်လုပ် firewall တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့သည်။ Onion Pi တွင်အလားတူလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်၊ သို့သော်အခြားစီမံကိန်းနှင့်မတူသည်မှာ၊ အပြင်ဘက်မှကြည့်ရှုလိုပါက Onion Pi သည်လုံခြုံမှုကိုပေးသည် ငါတို့အိမျ၌အဖွဲ့များရန်။ Onion Pi သည် Tor Network ၏ protocol ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ထက်လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုပိုမိုပေးနိုင်ရန်ကြက်သွန်နီအလွှာများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသော network ဖြစ်သည်။ On ဒီ link ကို ဒီစီမံကိန်းကိုဘယ်လိုဆောက်ရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုပြောတယ်။
ကွန်ပျူတာသည်အိမ်များ၊ ဘုံ၊ သာမန်နီးပါးလိုအပ်သောကိရိယာဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၀ ကထိုကဲ့သို့သောအရာမဟုတ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Raspberry Pi နှင့် eReader အတွက်ဤစီမံကိန်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အခြေခံကွန်ပျူတာရှိနိုင်တယ် ငါတို့မျက်စိ၏ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေခြင်းမှရှောင်ရှားရန်စံပြမျက်နှာပြင်ရှိသည်။ အခြားစီမံကိန်းများနှင့်မတူပါက KindleBerry Pi သည် eReader အဟောင်းကဲ့သို့သော gadget ကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ် gadget တစ်ခုတည်းတွင် eReader နှင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိနိုင်သည်ဟူသောရိုးရှင်းသောအချက်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။
အိမ်များစွာတွင်ကစားကွင်းသည်အိမ်၏အရေးကြီးသောအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်လာသည်။ သာမာန်အားဖြင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ဆိုဖာနှင့်ဗီဒီယိုခလုတ်များ၊ မီဒီယာစင်တာများစသည့်ဂိမ်းကစားစရာများစသည်တို့ဖြစ်သည် SuperMario Bros ကဲ့သို့သောရာသက်ပန်ဗီဒီယိုဂိမ်းများပါ ၀ င်သည့်စိတ်ကြိုက် arcade စက်တစ်ခုဖန်တီးပါ။ Raspberry Pi ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းတစ်ခုအတွက်သူတို့တောင်းခဲ့တဲ့ ၂၅ Pesetas ကိုပေးစရာမလိုဘဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ Arcade စက်ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောပစ္စည်းများနှင့် Raspberry Pi Zero W ၏ကျေးဇူးကြောင့်အကုန်အကျသက်သာသည်။ On ဒီ link ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းခန်းအတွက် Arcade စက်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ပြီးခဲ့သည့်စီမံကိန်းသို့ပြန်သွားသောအခါဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မူလဂိမ်းကောင်လေး၏မျိုးပွားခြင်းအကြောင်းပြောနေသည်။ Raspberry Pi Zero W. မှဤ Arcade စက်ကိုကောင်းမွန်စွာဖန်တီးနိုင်သည် ဤစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ခက်ခဲသောအရာမှာထည်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကမူရင်းစက်ဟောင်းကိုသုံးတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် 3D ပရင်တာတစ်လုံးနဲ့အတူအမှုန့်ထုတ်တာလား။ သို့သော်ဤအဝေးမှ၎င်းကမ်းလှမ်းသည့်ဖျော်ဖြေရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်ကျစရိတ်သည်အလွန်နိမ့်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းပြောနေတာခဲ့ကြသည် ဒီစီမံကိန်း သို့သော်သင်လိုချင်ပါက Instructables တွင်ခြားနားသောသေးငယ်သောအလားတူစီမံကိန်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အိမ်၏အပူချိန်ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ဒီဂရီသို့မဟုတ်နှစ်နှစ်သည်အပူသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုတစ်နှစ်လျှင်ယူရိုရာနှင့်ချီသုံးစွဲစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အပူချိန်မော်နီတာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ဒီ Proyect သည် အခန်းတစ်ခုချင်းစီ၏အပူချိန်ကိုအမြင်အာရုံဖော်ပြသည့် Raspberry Pi၊ အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာနှင့် LCD မျက်နှာပြင်တစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုတိကျသောအပူချိန်မော်နီတာတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ရှိမည်သည့်အခန်းတစ်ခန်းလုံးတွင်မဆိုအာရုံခံများကိုချဲ့ရန် Arduino boards ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်ရိုးရိုး Raspberry Pi ဖြင့်ရလဒ်ကောင်းများရနိုင်သည်။ On ညွှန်ကြားချက် သင်ဤစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ပွဲလမ်းသဘင်များအတွင်းလူများစွာသည်အားလပ်ရက်သွားလေ့ရှိသည်။ လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အိမ်များကိုပြproblemsနာဖြစ်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေ၊ အစာကျွေးရန်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစသည်တို့လိုအပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပင်များအတွက်အလိုအလျောက်ရေလောင်းစနစ်။ ထို့အပြင် Raspberry Pi ၏ Wi-Fi လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမှပင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဒီမှာ ညွှန်ကြားချက်များစာမျက်နှာ ဆော့ဗ်ဝဲ၊ ပစ္စည်းများစာရင်းနှင့်ဤစီမံကိန်းအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလမ်းညွှန်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ယခင်ကကျွန်ုပ်တို့အပြင်ဘက်နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန်အိမ် firewall တစ်ခုဖန်တီးရန်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဒီစီမံကိန်းကဒီပရောဂျက်ကိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ Raspberry Pi နှင့်စမတ်အလင်းများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အိမ်တော်၌အလင်းအိမ်ဖွင့်နိုင်ပါတယ် သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမှပစ္စည်းအချို့။ ပုံမှန်မီးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းထပ်တူပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းအတွက်မီးသီးများကို“ ကောင်းသော” ပြန်ပေးသည့် adapter ကိုတည်ဆောက်ရန်လိုသည်။ Instructables တွင်သင်ရှာနိုင်သည် အဆောက်အ ဦး လမ်းညွှန် ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ် ဦး ထက်ပိုသောမီးများကိုပိတ်ထားရန်မေ့နေသောကြောင့်ဖြစ်သည် အဲဒါမတူဘူးလား
ဖန်သားပြင်ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုအချက်အလက်များ၏ကြီးမားသောပမာဏပူဇော်လိမ့်မည်ဟုမိုးလေဝသစခန်းဖြည့်စွက် အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ လေဖိအား၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ အလင်းအဆင့်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်အဆင့်များကဲ့သို့သော။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုကြော့ရှင်း။ ဂရုစိုက်တတ်သောအမှုပြုလုပ်ရန်စီမံပါကကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိုးလေဝသဌာနရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအမေဇုန်တွင်ဝယ်နိုင်သည်။
ဒီ link မှာသင်ရှိသည် ညွှန်ကြားချက် အခုအလုပ်လုပ်ဖို့။
သင်၏လက်ချောင်းထိပ်ရှိ FM လိုင်းတစ်ခု
မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကရေဒီယိုဖြစ်ပါက၊ Raspberry Pi ကို အသုံးပြု၍ အသံကိုဖွင့်ရန်အင်တာနာနှင့် Python script တစ်ခုအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်မည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များသည်မိတ်ဆွေများနားထောင်နိုင်မည့်အနီးအနားရှိရေဒီယိုများမှအစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်လာနိုင်သည်။
အောက်ပါအဆင့်များမှသင်တည်ဆောက်နိူင်သောဤစက်ကိရိယာ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁ FM မှ ၂၅၀ MHz အထိလှိုင်းနှုန်းများကိုလွှင့်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်၊ ပုံမှန်စံကြိမ်နှုန်းတွင် (1 MHz မှ 250 MHz) သို့ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ တရားဝင်ဘူတာရှိသည့်ဘူတာများစွာ၏ထုတ်လွှင့်မှုများကိုသင်လေးစားရမည်ကိုလည်းစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။
ဒီမှာ သင်၏ FM Station ကိုတည်ဆောက်ရန်သင့်တွင်ညွှန်ကြားချက်များရှိသည်။
အားလပ်ရက်များရောက်သည့်အခါတိုင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုမည်သည့်နေရာမှမည်သူနှင့်မည်သည့်နေရာမှထွက်ခွာရမည်နည်းနှင့်ပြusuallyနာတက်လေ့ရှိသည်။ ကံကောင်းတာကကြောင်တွေနဲ့နေထိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တစ်နေ့ကိုတစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ရက်တစ်ကြိမ်ချစ်ခင်ကြင်နာမှုရှိရင်တောင်သူတို့ကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးတစ်ယောက်ယောက်ဆီလာလည်စေနိုင်တယ်။ ဒါပါ Raspberry Pi ကို ထပ်မံ၍ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အလိုအလျောက်လမ်းခွဲကိုဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည် ငါတို့ရဲ့ကြောင်တွေ (သို့) အခြားတိရိစ္ဆာန်များကိုအစားအစာပမာဏကိုအလိုလျောက်ဖြန့်ဝေလိမ့်မယ်။
စီမံကိန်းသည်နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည် ပါဝါကြောင် feederဒေးဗစ်ဘရိုင်ယန်ကတီထွင်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံခဲ့ပြီးလူတိုင်းသည်အားလပ်ရက်ခရီးတွင်ပင်သူတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစားသောအရာကိုထိန်းချုပ်လိုကြသည်။ ငါတို့ Raspberry Pi ၏ကျေးဇူးကြောင့်ထိန်းချုပ်ထားသောစောင့်ကြည့်ရေးကင်မရာလည်းထပ်ထည့်ပါကစီမံကိန်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးအကျိုးအမြတ်လည်းဖြစ်စေနိုင်သည်။
Siri ကို, Apple ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွင်ပါ ၀ င်သောလူသိများသောအသံလက်ထောက်သည်ဤစီမံကိန်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်သည် အသံအမိန့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့်ပါ။ လုပ်ငန်းတာဝန်သည်မလွယ်ကူကြောင်းသင့်အားကျွန်ုပ်တို့သတိပေးပါသည်၊ သို့သော်ရလဒ်သည်ရိုးရိုးလေးသာဖြစ်ပြီးအားလုံးသက်သောင့်သက်သာဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်တော့မှကားထဲကထွက်ဖို့မလိုတော့ဘူး၊ ဒါ့အပြင်သော့ကိုပြတင်းပေါက်ကနေပြန်ဖွင့်စရာမလိုတော့ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Motion sensor ကင်မရာ
Raspberry Pi ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များစွာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းသည်စောင့်ကြည့်ကင်မရာဖြစ်လာသည့်တိုင်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ပြီးတော့ဒီအစွမ်းထက်တဲ့ကိရိယာကကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီး (သို့) အလွယ်တကူဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုတာပါပဲ လှုပ်ရှားမှုများကိုစစ်ဆေးသောစောင့်ကြည့်ကင်မရာ၊ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်အတွင်းရှိဖြစ်နိုင်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခွင့်ပြုသည်.
En ဒီ link ကို သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာကင်မရာကိုတည်ဆောက်ရန်သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များရှိသည်။
MoccaPi သို့မဟုတ် Raspberry Pi ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအကောင်းဆုံးကော်ဖီ
Raspberry Pi အသုံးပြုမှုသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါများစွာသောသူတို့ကသံသယဖြစ်သော်လည်း iota တစ်ခုမှားသည်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်ကြောက်သည်။ ပြီးတော့ဒီလူကြိုက်များတဲ့ကိရိယာကငါတို့ရဲ့မီးဖိုချောင်ဆီကိုရောက်သွားပြီ MoccaPi, ကော်ဖီသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်ထုတ်လုပ်ရန်စမတ်ကော်ဖီထုတ်လုပ်သူကြိုးစားခဲ့သူအားလုံးရဲ့ထင်မြင်ချက်အရအတော်လေးကောင်းတယ်။
စုစုပေါင်းစျေးနှုန်းကမမြင့်ပါဘူး၊ ငါတို့သိချင်တဲ့ကော်ဖီစက်တစ်လုံးတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဝယ်လိုက်ရင်ယူရို ၈၀ ထက်မပိုသင့်ဘူး။
သငျသညျယနေ့ MoccaPi တည်ဆောက်ချင်လျှင်, ဒီမှာ ညွှန်ကြားချက် သငျသညျကိုလိုက်နာသင့်ကြောင်း။
သင်ဟာအပင်များကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးပန်းတစ်ပွင့်နှင့်ပြည့်စုံသောဥယျာဉ်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရန်မြေကွက်ငယ်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်လိုပါက၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါက Raspberry Pi နှင့်အတူဤစီမံကိန်းသည်သင်အမြဲအိပ်မက်မက်ခဲ့သောအရာများနှင့်နီးစပ်ပေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဟာသတစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်းဤစွမ်းအားမြင့်ကိရိယာများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးနိုင်သမျှရိုးရိုးလေးနှင့်အနည်းငယ်ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ပန်းပွင့်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီဂျစ်တယ်ဥယျာဉ်၊ ပန်းများအနားမှာငှက်များသို့မဟုတ်တွယ်တာများပေါ်လာခြင်းသို့မဟုတ်ညအချိန်တွင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလင်းရောင်ရှိခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်.
အပေါ်တွင်တွေ့နိုင်သော YouTube ဗွီဒီယိုတွင်ညွှန်ကြားချက်အားလုံး (နှင့်) တွင်ရှိသည် အောက်ပါလင့်ခ်), သင်၌ RaspBerry Pi ရှိပါကသင်အလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်မည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလှပသောဥယျာဉ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်သင့်စိတ်ကူးကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
RaspBerry Pi သည်အချိန်တိုတိုအတွင်း၌အများပြည်သူမသိသောစက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရန်၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ စီမံကိန်းများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်သင့်အိမ်အတွက်သင့်တော်သည့်လက်တဆုပ်စာကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ဤအသေးစားနှင့်စျေးသိပ်မကြီးသောစက်ကိရိယာ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အသုံးချမှုများသည်လက်တွေ့ကျအဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။ လူအများစုက RaspBerry Pi နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောဖြစ်နိုင်ချေများသည်သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်၎င်းကိုတီထွင်နိုင်ခြင်းနှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းတို့နှင့်အလှမ်းဝေးသည်ဟုဆိုသည်။
ဤစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သင့်သည်ဟုသင်ထင်သောသင့်အိမ်အတွက် RaspBerry Pi နှင့်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုသင်ဖန်တီးပြီးပြီလား။။ သို့ဆိုလျှင်ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ် (သို့) ဤစာမူအပေါ်မှတ်ချက်များအတွက်သိုလှောင်ထားသောနေရာမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ထိုစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်ပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Raspberry Pi » Raspberry Pi စီမံကိန်းများ
San Pedro Riera မှJoséMaríaDíaz ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ Raspbery pi နဲ့ LibreElec ဖြန့်ဖြူးတဲ့မီဒီယာစင်တာတစ်ခုရှိတယ်။ ၎င်းသည်ဇိမ်ကျ။ - Kore ဟုခေါ်သောအခမဲ့ android application ဖြင့်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မသက်သာပါ။
San Pedro Riera မှJoséMaríaDíazကိုပြန်ပြောပါ
ငါ feeder ကိုအတူတကွစုဆောင်းနေတယ်။ ဒါပေမယ့်ခွေးတွေကကွန်ကရစ်ဒါမှမဟုတ်သံမဏိတွေထက်လက်လှမ်းမမီနိုင်တဲ့အရာတွေ၊ သူတို့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်လို့သင်တင်ထားတဲ့စီမံကိန်းမှာအစားအစာဖြန့်ဝေဖို့နည်းလမ်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအတွက် Raspberry server ကိုအနည်းငယ်နားထောင်သော 32kg force servo ကိုထိန်းချုပ်သော ESP64 ကိုအသုံးပြုသည်။ api interface ကိုတိုက်ရိုက်လည်ပတ်မှုမှပိုကောင်းအောင်ခွဲထားပါ။
3D ပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့်ချောကလက်ပြုလုပ်သော Miam Factory သည်သင်၏အိမ်သို့၎င်းပို့သည်
DJI သည်၎င်း၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုထူးခြားသော 'အော့ဖ်လိုင်း' mode ပေးသည်